09 July 2019 : 12:59:42
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းဒေသ ကြီးအဆင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကဏ္ဍစုံမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နေ့လည် ၁၄:၀၀ နာရီတွင် ထားဝယ်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းဆွေ (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံ) တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် နိုင်ငံရေးပါတီရုံးဖွင့်လှစ်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ(၈)ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသောလူမှုအဖွဲ့အစည်း(၇)ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ မွန်တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်းအင်အား (၄၅) ဦး တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းဆွေက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများကို လွတ်လပ်ရမည်၊ တရားမျှတရမည်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်၊ အများယုံကြည်လက်ခံသည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရမည်၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ရမည်ဆိုသည့် စံ (၅)ချက်နှင့်အညီ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို လည်းကောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှန်ကန်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရယူ ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်လင်းက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ( ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ ) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရွေးကောက်ပွဲအရာရှိက ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် အခြေခံမဲဆန္ဒရှင် စာရင်းရရှိရေး လူဦးရေစာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းဆွေက ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
Posted in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ, ႏုုိင္ငံေရး on 3:56 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
ဂျပန်ပါဝင်လာတော့မည့် ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း
ချမ်းမြထွေး 25 JUL 2019 |
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ ပင်မစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ရန် မြန်မာ“ဂျပန်“ထိုင်း သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ပါဝင် လာရေး အစိုးရဝန်ကြီးများအဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ (Joint Cooperation Committee - JCC) ဆွေးနွေးမှုများ စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်း“မြန်မာအကြားသဘောတူညီချက်အရ ကနဦးအဆင့်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် ကိစ္စများသည် ၁၀ နှစ်တာကာလသို့ ရောက်သည့်တိုင် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခြင်းမရှိသေးပေ။
သို့ရာတွင် ပင်မစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့်အဆင့်တွင် ဂျပန်ပါဝင်လာရေးကြိုးပမ်းမှုသည် ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာခဲ့ကာ ဂျပန် “ မြန်မာ အစိုးရ အကြား စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဆင့် ဆွေးနွေးပြီးပြီ ဖြစ်သည်။
"စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး အကောင်အထည်ဖော်မယ့်အဆင့်မှာ ဂျပန်ပါဝင်ပြီး သုံးနိုင်ငံအစိုးရ ပေါင်းလုပ်သွားမယ်။ စီမံကိန်းအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ပေါ် အောင်တော့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီ"ဟု အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းများကို ကိုင်တွယ်နေသော စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်က မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောသည်။
ထားဝယ်မြို့၏မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၀ အကွာတွင် အရှေ့တောင်အာရှ ၏အကြီးဆုံး စက်မှုကုန်သွယ်ရေးဇုန်ကြီးအဖြစ် ဟက်တာ ၂၀çဝ၀ဝ နီးပါးရှိသောမြေပေါ်တွင် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြန်မာနှင့်ထ ိုင်းအစိုးရအကြား နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့သည်။
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းကို မြန်မာနှင့် ထိုင်း နားလည်မှုစာချွန် လွှာရေးထိုးထားပြီး ကနဦးအဆင့်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်သူအနေဖြင့် အီတာလျံထိုင်းကုမ္ပဏီက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပင်မစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့်အဆင့်၌ မြန်မာ“ဂျပန်“ထိုင်း သုံးနိုင်ငံဆောင်ရွက်ရန် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဂျပန်ပါဝင်သော သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းသည် အောင်မြင်နေပြီး အလားတူ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည်လည်း ဂျပန်ပါဝင်လာပါက ကောင်းလာမည်ဟု မြန်မာအစိုးရက မျှော်မှန်းထားသည်။
"ဂျပန်ပါဝင်လာရင်တော့ ပိုပြီးကောင်းသွားမယ့် အနေအထားပါ။ ဂျပန် အစိုးရဘက်ကလည်း အခုလက်ရှိမှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့အနေအထား တွေ့ရတယ်။ မြန်မာ“ဂျပန်ပူးပေါင်းတာက အလားအလာကောင်းတဲ့ အနေအထားဖြစ်တယ်" ဟု ဦးခင်မောင်လွင်က ပြောသည်။
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA) သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင် ထားပြီး တရားဝင်အစီရင်ခံစာထွက်ရှိရန် ဆောင်ရွက်နေသည်။
"ဂျပန်က ကမ္ဘာမှာတောင် နာမည်ရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ။ ထိုင်းနိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လုံးဝမထင်ဘူး။ သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ စက်ရုံတွေထောင်ပြီး တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းက အလုပ်သမားတွေကိုပဲ ခေါ်ပြီးလုပ်ခိုင်းမယ့်သဘောရှိတယ်"ဟု ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းတည်နေရာရှိ ရေဖြူမြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးကြည်စိုးက သုံးသပ်သည်။
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းနေရာနှင့် ဆက်စပ်၍ အခြားပင်လယ် ကမ်းခြေနေရာများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ငါးသယံဇာတမှ စက်မှုကုန်ချောထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများ၊ မွေးမြူရေးအစာထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ ပင်လယ်ရပ်ခြားခရီးသွားလာမှုအပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ သွားလာမှုများလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသတွင်းရှိ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
တစ်ပြိုင်နက်မှာပင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့လာနိုင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများသည် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ပြန်လာ၍ မိသားစုနှင့် အတူနေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ဂျပန်ပါဝင်လာပါက ဂျပန်နိုင်ငံမှ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ရာ ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင်ရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကြည်စိုးက ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာအစိုးရကြားချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်ရှစ်ခုတွင် နှစ်ဖက်ဖြည့်ဆည်းရမည့်အချက် စုစုပေါင်း ၇၈ ချက်ရှိပြီး ၅၅ ချက်ကို အီတာလျံထိုင်း က ဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်အချက်မှာ မြန်မာအစိုးရဘက်က ဖြည့်ဆည်း ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရဘက်က လုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စများတွင် မြေငှားသဘောတူစာချုပ်၊ EIA, SIA, One Stop Service နှင့် အခြားအချက်များ ပါဝင်သည်။
ကနဦးအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် စီမံကိန်းစုစုပေါင်း ကိုးခုရှိပြီး နှစ်လမ်းသွားကားလမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းငယ်၊ ကနဦးစက်မှုဇုန်၊ ကနဦးမြို့ပြလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ အချို့စီမံကိန်းများကို စတင်ထားသော်လည်း ကုမ္ပဏီက ပြီးပြတ် အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ ရပ်နားထားသည်ဟု ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဆန်းက ပြောသည်။
အဓိကကျသော နှစ်လမ်းသွားကားလမ်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံ ကိန်းငယ် စသည့် အရေးကြီးသော စီမံကိန်း သုံးခုခန့်ကို အီတာလျံထိုင်းကုမ္ပဏီ က ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာအစိုးရက ထိုင်းအစိုးရဆီမှ ချေးငွေယူ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်ဟု ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကော်မတီမှ သိရသည်။
နှစ်လမ်းသွားကားလမ်းဖောက်ရန် ချေးငွေသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကာ မြေပြင်တွင် လေ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းများ စက်တင်ဘာလကုန်တွင်ပြီးစီးပါက ချေးငွေသဘောတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။ လမ်းဖောက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ နှစ်လယ်ပိုင်းခန့်တွင် လမ်းဖောက်လုပ်မှု စတင်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
မြန်မာဘက်မှ ဆောင်ရွက်ရန် နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသည့် မြေငှားစာချုပ် သဘောတူညီချက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မကြာမီပေးပို့သွားရန်ရှိပြီး ယင်းကိစ္စပြီး ပါက မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့်ကိစ္စများ ပြီးစီးပြီဖြစ်သည်ဟု ဦးခင်မောင်လွင်က ပြောသည်။
ကနဦးအဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အီတာလျံထိုင်းကုမ္ပဏီက လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စကိုJCC အစည်းအဝေးတွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကာ ကုမ္ပဏီဘက်က မဆောင်ရွက်နိုင်ပါကရှင်းလင်းခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အီတာလျံထိုင်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းကို၂၀ဝ၈ ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ သော်လည်း စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုမရှိခြင်း၊ နှောင့်နှေးကြန့် ကြာခြင်းများရှိခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် စာချုပ်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဟု ဦးမြင့်ဆန်းက ပြောသည်။
"စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေမကိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ထွက်ပေါ့။ တခြားတင်ဒါ ခေါ်မှာပေါ့။ အခုကျ ထွက်လည်းမထွက်ဘူး။ လုပ်လည်း မလုပ်ဘူး။ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အရင်တုန်းက သူကုန်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပေးလိုက်ပြီး ထုတ်လိုက်မလား။ ဒီတိုင်းပဲဆက်ထားမလား။ ဒီတိုင်းပဲဆက်ထား ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ နှောင့်နှေးခြင်းဗျူဟာနဲ့သွားနေမှာပဲ။ အစိုးရဘက်က အားနည်းချက်က မူဝါဒမပြတ်ဘူး"ဟု ဦးမြင့်ဆန်းက ၎င်းအမြင်ကို ပြောသည်။
အီတာလျံထိုင်းကုမ္ပဏီသည် ၂၀ဝ၈ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထိသာ လုပ်ငန်း အနည်းငယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် ယခုအချိန်ထိ အကောင်အထည် ဖော်မှုလုံးဝမရှိဘဲ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။ ထိုသို့ရပ်နားထားမှုသည် ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအပြင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် ပူးတွဲပါလာမည့် လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ခဲ့ခြင်းအတွက် အားမလိုအားမရဖြစ်စေ ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
ထို့ပြင် စက်မှုဇုန်ဧရိယာအတွင်းပါဝင်သည့် ဥယျာဉ်ခြံ၊ လယ်ယာမြေများကို နိုင်ငံတော်က သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း ဥပဒေလုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းနှင့်အညီ မြေယာလျော်ကြေးပေးခြင်း၊ အစားထိုးမြေပြန်လည်ပေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင် ပေးထားခြင်းမရှိဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် စီမံကိန်းဧရိယာထဲရှိ မြေများကို လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံ(၇) လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စများတွင် ဒေသခံများက အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေရသည်ဟု ထားဝယ်ဒေသခံ ဦးသန်းဝင်းက ပြောသည်။
အီတာလီလျံထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် မြေယာလျော်ကြေးပြဿနာများစွာရှိခဲ့ပြီး လျော်ကြေးပေးရာတွင်လည်း တန်းတူညီမျှမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းအစီအစဉ်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိခွင့်မရခဲ့ခြင်းများအပြင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်း လွန်စွာ အားနည်းခဲ့သည့်အတွက် မြေယာဈေးကစားခြင်းဒဏ်များ ခံခဲ့ရကြောင်း၊ မြေယာဈေးကစားသူကြောင့် မြေယာလျော်ကြေးကို ဒေသခံများက ကောင်းမွန် စွာမခံစားခဲ့ရဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မြေယာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်ဦးဆုံးပြေလည်မှုရအောင် ဖြေရှင်းထားသင့်သည်ဟု ဦးကြည်စိုးက ပြောသည်။
ကနဦးစီမံကိန်းကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ရန် ရှစ်နှစ်ကြာမြင့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယခုအခါ ကနဦးအဆင့်နှင့် ပင်မစီမံကိန်းကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်ရန် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက ဆွေးနွေးမှုကို အစိုးရပိုင်းကလည်း သဘောတူညီကြောင်း၊ စီမံကိန်းကို အဓိကအကောင်အထည်ဖော်ရန် ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းသည့်ကုမ္ပဏီ လိုအပ်သည်ဟု ဦးမြင့်ဆန်းက ပြောသည်။
Posted in ဂ်ပန္, ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း, ထိုင္း, ထိုင္းအစိုးရ on 1:35 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့နိုင်ငံခြားခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုမှာ ၃ နှစ်ဆက်တိုက်ပုံဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကိုကျော်တက်သွားကြောင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးလှထွေးကပြောကြားသည်။
“နိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရောက်မှုက အခု ပုဂံကို ကျော်နေပြီ“ဟု ဦးလှထွေးက ဆိုသည်။
တနင်္သာရီတိတိုင်းအတွင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုမှာ ၃၅၀၀၀၀ ဦးကျော်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ခရီးသည် ဝင်ရောက်မှုမှာ ပုံမှန်မြှင့်တက်နေကြောင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးညိုအေးက ပြောသည်။
ပုဂံဒေသသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၂၈၀၀၀၀ ကျော်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်၃ သိန်းကျော်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်၂ သိန်းခွဲကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသို့နိုင်ငံခြားခရီးသည် ဝင်ရောက်မှုမှာ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၃၃၀၀၀၀ကျော်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၃၄၀၀၀၀ကျော်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၃၅၀၀၀၀ကျော်ရှိခဲ့သည်ဟု တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းချိန်ကပင် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ကျဆင်းခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
“ခရီးသွား ကျဆင်းချိန် ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တောင်ကျမသွားဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဒေသ ပုံမှန် data အမြဲတမ်း ဦးမော့နေတယ်” ဟု တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှ ဦးညိုအေးက ဆိုသည်။
တိုင်းအတွင်း ခရိုင် ၃ ခုရှိသည့်အနက်ကော့သောင်းခရိုင်မှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး တိုင်းအတွင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ကျွန်းများတွင် စနစ်တကျ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်နိုင်အောင်အတွက် ပြင်ဆင်မည်ဟု သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးလှထွေးက ပြောသည်။
ခရိုင်အလိုက် ခရီးသွားကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ခရီးသွားများအဆင်ပြေမွေ့စေရေးအတွက် အဆိုပါကော်မတီများက လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်၊မန ္တလေး၊ ပုဂံနှင့် အင်းလေးတို့မှာခရီးသွားဝင်ရောက်မှုအများဆုံးနေရာများဖြစ်သည်ဟုတိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
တင့်လွင်၊ ဟသၤာမီဒီယာ၊ ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၉
Posted in ခရီးသြားလုပ္ငန္း, တနသၤာရီတုိင္း on 2:44 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
“ေတာင္းမွေပး၊ တိုက္မွရ “သည့္ မူအစား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရေရး ထားဝယ္လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတာင္းဆို
Dawei Watch- Auust 4, 2016
“ေတာင္းမွေပး၊ တိုက္မွရ ” သည့္ မူအစား တိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ ရထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးတို႔ကို စံႏႈန္း တစ္ရပ္အရ တန္းတူရေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရေရး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ထားဝယ္လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။
ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ညီလာခံ သို႔ တင္သြင္းသည့္ ထားဝယ္လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ထိုက္သင့္တဲ့ နယ္ေျမ၊ လူဦးေရရွိတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ လို႔ ေတာင္းစရာလည္း မလိုဘူး၊ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ယူရတဲ့ အစဥ္အလာႀကီးကိုလည္း ဆက္မရွိေစခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ တန္းတူညီမၽွမႈရွိစြာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒကို ခ်မွတ္ၾကဖို႔ ဆိုလိုတာပါ” ဟု ထားဝယ္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ကိုေက်ာ္မင္းထိုက္က ေျပာသည္။
Posted in မွတ္တမ္းမွတ္ရာ, သတင္း, ႏုုိင္ငံေရး on 4:44 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
ထားဝယ္ခ႐ုိင္ ၄ ၿမဳိ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္မ်ား
Posted in မွတ္တမ္းမွတ္ရာ, ေရြးေကာက္ပြဲ, ႏုုိင္ငံေရး on 12:15 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
၂၇ စက္တဘာ ၂၀၁၄
ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေတြ႕ရေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အိုခ်ာ (ဓာတ္ပုံ – Time)
ထုိင္းႏုိင္ငံ လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာသည္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ရန္ ရွိၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာ စီးပြားေရး အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုခုိင္မာေစေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ရွိသည့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စတင္၍ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းက ဆုိသည္။
Posted in ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း, ထိုင္းအစိုးရ on 2:45 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
Thai leader to visit Myanmar next month to help revive Dawei projects
BANGKOK, Sept. 25 (Xinhua) -- Thai leader Gen. Prayuth Chan- ocha will pay an official visit to Myanmar next month inabid to push for the delayed Dawei deep-sea port and industrial estate projects,ahigh-ranking Thai diplomat said on Thursday.
According to Thai Ambassador to Nay Pyi Taw, Pitsanu Suwannachot, Gen. Prayuth has picked Myanmar in his first official trip overseas since he was named premier.
Posted in English, ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း, ထိုင္းအစိုးရ on 2:26 PM by Tavoyan | Leaveacomment Edit
ထားဝယ်၊ ဇွန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့နိုင်ငံခြားခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုမှာ ၃ နှစ်ဆက်တိုက်ပုံဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကိုကျော်တက်...
Dawei Watch- Auust 4, 2016 “ေတာင္းမွေပး၊ တိုက္မွရ ” သည့္ မူအစား တိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ ရထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား ...
ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (67) သတင္း (37) English (27) ဖတ္မွတ္စရာ (24) ဓါတ္ပုံ (13) မွတ္တမ္းမွတ္ရာ (12) ကဗ်ာ (6) သတင္းဗြီဒီယုိ (6) ႏုုိင္ငံေရး (6) ထိုင္းအစိုးရ (4) သီခ်င္း (4) ထားဝယ္ရုိးရာ (3) ဗထူးစာေစာင္ (3) အေတြးအျမင္ (3) ဘေလာ့ဂ္အေၾကာင္း (2) ေဆာင္းပါး (2) ေပးစာ (2) ေရြးေကာက္ပြဲ (2) TYO အေၾကာင္း (1) ကုိယ္ေတြ႔ (1) ခရီးသြားလုပ္ငန္း (1) ဂ်ပန္ (1) တနသၤာရီတုိင္း (1) ထိုင္း (1) ပညာေရး (1) ဗုိလ္မွဴးဗထူး (1) လယ္သမား (1) အမွတ္တရ (1) အလုပ္သမား (1) ေက်ာက္မီးေသြး (1)
Original Template by Dicas Blogger. Developed by Tavoyan.
အလြမ္းေျပထားဝယ္ Facebook Group က ျပဳလုပ္မွ်ေဝထားတဲ့ ebook ကို ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။
tavoyan@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
TYO Reg. Form.
Copyright © Tavoyan | Powered by Blogger